Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2020 → août → 1 → Masakalina Anjozorobe : Lasa avokoa ny omby, noraofin’ny dahalo tamin’ny gony ny vola teo an-tanana
Redaction Midi Madagasikara 1 août 2020 3 Commentaires
Fokonolona 2 août 2020 at 19 h 57 min · Edit
Izao no manambara sy manamafy ny tsy fahaizan’ny mpitondra sy ny mpiaramiasa aminy, hany ka ny vahoaka no mizaka ny tsy rariny.
Fokonolona 2 août 2020 at 19 h 44 min · Edit
Misy fanambarana roa tsy mitovy ny voalazan’ny mponina voatafika sy ny mpitandro ny filaminana. Azo porofoina izany amin’ny alalan’ny fijerena ny historique d’appel.
Ary ianareo mpitandro ny filaminana milaza hoe tsy ampy fitaovana hanoherana ireo dahalo, efa nanao fianianana ianareo hiaro ny mponina eny fa na hanao ny sorona ny ainareo aza. Tsy maintsy misy olona ao amin’ny tanàna manana fiara, ary ny mpitandro ny filaminana dia manana zo hampiasa izany amin’ny toe-javatra toa izao. 10km izany tsy lavitra mihitsy, ary raha olona mandroaka omby tsy ho lasa lavitra mihitsy. Eny fa na dia atao hoe efa nitsoaka ireo dahalo, azo atao hatrany ny manaraka ny lalan’ny dahalo, dian’omby marobe tsy azo hafenina.
Ny mpitandro ny filaminana no tsy manao ny asany, hatrany ambony ka hatrany ambany. Amin’izao fotoana izao dia lasa famoretam-bahoaka fa tsy miaro azy amin’ny fotoana ilana izany. Tadidio mandrakariva fa ny volambahoaka no hanakaramana anareo, ary raha mpitandro filaminana kanosa mieritrereta, miovà asa fa tsy mety aminareo ilay izy.
rakoto 1 août 2020 at 19 h 33 min · Edit
Monsieur le Président ,mitalaho re Tompoko ,SOLOY i RICHARD BAOMBA fa tena tsy mahavita azy intsony .Amin’ny fomba ahoanamoa no hiadian’ny vahoaka amin’ireo dahalo manana basy mahery vaika sy antsibe . Marobe ireo Jeneraly any @ région afaka mahasolo azy tsara sady tsy mataho-maty ,sy vonona hiaro ny vahoaka .Misaotra Tompoko.